Nsonaazụ kachasị elu na Google na Semalt
Ozi juputara na Internetntanetị juputara na ozi. Akwukwo ozi, ozi, ozi ndi anyi choro ka o doo anya na ndu anyi bu ubochi juru anyi anya. Ọtụtụ puku webụsaịtị na-ebikọ na mbara igwe, na ọtụtụ n'ime ha bụ ndị iro n'ezie. Yabụ kedu ka anyị ga - esi mee ka ahịa na-aga nke ọma n'ọnọdụ ndị a? N'ezie, nkwalite na dijitalụ nwere iwu nke ya na ndị ahụ, ndị ghọtara ha nke ọma meriri n'ọsọ a.
Obi abụọ adịghị ya na, ịchụ ahịa n'ịntanetị dị iche na ihe ọ bụla ị na-eme na ndụ n'ezie iji kpata ego ị ga-enweta ma nweta uto nke ụlọ ọrụ gị. Ndị mụtara iwu ahụ nwere ike ịchọta ihe ịga nke ọma. Yabụ iji mkpokọta weebụsaịtị na-enyere aka igosi ngwa ahịa ma ọ bụ aka ọrụ gị. Azụmaahịa gị na-ahụ maka ndị ahịa.
Ọ nwere ike ịbụ ihe dị mkpa maka ndị nwere azụmaahịa, ndị ọkachamara mmekọrịta ọhaneze, na ndị na - azụ ahịa ka ha mụta ụzọ ọhụrụ eji eji ngwaọrụ weebụ eme ihe nke ọma. Enwere ike kwalite ihe ọ bụla i mere iji kpata ego maka nsonaazụ ka mma.
Na-enweta enyemaka ọkachamara nke otu Semalt, azụmahịa gị nwere ike ịnweta nsonaazụ Google kachasị elu ma rute uru ị rọrọ.
Ọ bụ ohere ọ bụla iji nweta nsonaazụ na-akwado azụmahịa gị na thentanetị?
N’ebe a ma ọ bụ n’ebe ahụ, anyị na-ahụ akụkọ banyere ụmụ nwoke na ụmụ nwanyị ndị nwere ọchichọ ndị kpata ego ha n’ụzọ dị mfe na World Wide Web. N'ezie, ọ na-akpali akpali n'ezie. Ma akụkọ ndị ahụ na-abụkarị nsonaazụ ọma dị ọcha, okike ma ọ bụ ụta. Ma i kwenyesiri ike n’uche echiche ohuru nke iji bulie nnukwu ego na ya? You ga - enwe ike zuru ezu iji na - amụ ihe onwe gị, na - ewepụta oge buru ibu ebe ndị gị na ha na - agba mgba ga - arụ ọrụ na ndị ọkachamara iji ruo ihe mgbaru ọsọ ha. Ọ bụrụ na ịmaghị nke ọma ihe ị ga-eme, ọ ga-ewe ọtụtụ oge ịghọta etu o siri arụ ọrụ. Ọ bụrụ na ịnaghị enweta ihe zuru oke, ego maka nkwalite nwere ike imebi ihe efu.
Ga-abawanye okporo ụzọ e-commerce gị na-enweghị enyemaka ọzọ, ogologo oge ole ka ọ ga-ewe? N’enweghị mgbagha, ọ dị ezigbo mkpa ịnwe ihe ọmụma gbasara nkwalite ntanetị. Nwere ike gụọ ọtụtụ ozi, ịga webinars, sonye n'otu ma ọ bụ ọmụmụ. Nzọụkwụ site n’usoro, ị ga - enweta ozi ọhụụ site na ụzọ dị iche iche, mana ị gachaa, nsonaazụ gị ga - ewe gị iwe. Naanị mbọ gị ike agaghị ezu iji hazie ihe niile n'ụzọ ziri ezi. Na ọnọdụ a, azụmahịa gị ga-efunahụ ohere nke uto maka izu na ọnwa. Onye ọ bụla kwesịrị iche ugboro abụọ banyere ihe kachasị ha mkpa na nke a. Ha kwesiri inara onodu aku na uba a, ka ha kwesiri itinye ego ha n ’odinihu ha n’amamihe iji nweta nsonaazụ a ngwa ngwa?
Ngwunye ntanetị n'ịntanetị maka azụmahịa gị
N'ụbọchị ndị a, ụlọ ahịa n'ịntanetị abanyelarị ewu ewu. Ndị mmadụ nwere ike ịnọrọ n'ụlọ ma jiri oge ha na-eme ihe mgbe niile n'ịzụ ahịa, nweta ihe onwunwe na ndụ n'ezie. Nwere ike ịzụta ngwongwo na ọrụ n'akụkụ ọ bụla nke ụwa anyị, ọ nwere ike ịme ngwa ngwa dịka o kwere omume na afọ ndị gara aga. N'ụdị ọnọdụ ndị a, ọ dị nnukwu mkpa iji mee ka ọrụ gị zuru oke, chekwaa, lebara mmadụ niile anya ma nyere ha aka ịhọrọ nhọrọ kachasị mma. Echefula na mgbe ịre ahịa gachara.
Gịnị ka ị ga-eme ma ọ bụrụ na ọtụtụ ndị bịara na saịtị gị, chọọ azịza ajụjụ ha? Shouldkwesịrị ime ka ha nwee obi ụtọ na ụlọ ahịa ịntanetị gị. Ọ dị mkpa ịnweta ndị ahịa mgbe niile ma ọ bụ ọbụna na-eso ụzọ ika. Ọ bụ ya mere ndị ahịa azụmaahịa kwesịrị iji ngwaọrụ Semalt SEO na nkwado nke ndị ọkachamara nwere nkà. Dịka gị na ndị otu gị enweghị ike inwe oge zuru ezu iji nye mmadụ ọ bụla aka ma kwado ya ma ọ bụrụ na ha karịrị. Ndị mmadụ enweghị mmasị ichere, ya mere ndị ọchụnta ego ga-ebu ụzọ hụ ọnọdụ a ma soro ndị ọkachamara rụ ọrụ na ya.
Ingmepụta atụmatụ azụmaahịa mara mma maka ụdị azụmahịa ọ bụla, ịkwesịrị itinye ego maka ngwaọrụ SEO dị ike ma na-arụ ọrụ. Ọ ga-enwe mmetụta dị ogologo site na ụfọdụ ndụmọdụ sitere n'aka ndị ndụmọdụ anyị.
Ego dị iche iche eji enweta ego dị iche iche ka onye ọ bụla nwee ike ịhọrọ nke dabara adaba. Nwere ike ịdọrọ ndị na-azụ ahịa chọrọ ngwaahịa gị site na enyemaka ya site na iji atụmatụ aghụghọ, n'ezie.
Ì chere na ọ dị mfe ere? Ọ dị mma ịzụta ngwongwo na ụlọ ahịa n'ịntanetị nke e ji amamihe kee. Ọ ga-adị mfe ire ma ọ bụrụ na ịmepụta atụmatụ ga-ebuli gị elu. Nweta uru, juo ndumodu, na enyemaka si n’aka ndị mere ya nke ọma ọtụtụ oge. Ga - etolite ahia gi ma nweta ndi ahia gi nke siri ike, ndi ga enye gi aka na oru gi. Nwee njikọ, gosi uru gị, ma mee ndị ahịa nwere mmasi.
Ọrụ weebụ Web
Site n'enyemaka nke ngwaọrụ dị n'ịntanetị, ego a ga-ebili. Ọ ga - eme n'ihi na ebe nrụọrụ weebụ gị ga - enwe ike itinye ọtụtụ ndị ọhụrụ, mana ọ ga - abụ ndị ahịa sitere n'otu mpaghara. Site na atụmatụ nke ọkachamara nke Ulọ ọrụ Digital anyị mepụtara, ị nwere ike iru mpaghara, mba na mpaghara dị iche iche nke ụwa anyị. Ya mere Semalt ọ bụghị naanị na-enye ngwaọrụ SEO kamakwa ọ na-azụpụta atụmatụ iji nyere azụmahịa gị aka n'ọrụ n'ụwa niile ma bụrụ onye ama ama. Anyị nwere ike imeziwanye ikike nke igwe nchọta. Agencylọ ọrụ anyị na-enyere ndị ọkachamara aka ịhọrọ isi okwu ahụ dabara na azụmahịa gị.
Semalt ga - enye gị ohere ịnweta ozi dị mkpa gbasara ndị iro, data na - agbanwe agbanwe gbasara mpaghara ahịa ma ọ bụ ụlọ ọrụ gị. Ọ ga-ekwe omume ịlele metrik na mgbasa ozi mgbasa ozi, na-emezi mbọ gị na ọnụnọ gị dịka ọ dị.
SEO ga-adị ezigbo mkpa na narị afọ a. Na-etinye ego kwesiri ekwesi na imekọ ihe ọnụ kwa ụbọchị, onye na-azụ ahịa ga-enweta ụlọ ọrụ na-eto eto mgbe niile. Ngwa ahia gi ga - enweta okporoko osisi site na ngwa inyocha. A ga-ewepụ mmejọ azụmahịa mbu gara aga otu na otu. N'ezie, ọ dịghị onye zuru oke, obere ọdịda nwere ike ime, mana atụmatụ azụmaahịa siri ike ga-eme ka ụlọ ọrụ gaa nke ọma.
Mmepe nke azụmahịa dijitalụ na Internetntanetị bụ ihe kpatara ọdịdị Semalt. Ọ bụ na Septemba 2013 mgbe mmadụ ole na ole nwere ọgụgụ isi kpebiri na ha ga-abụ otu. Ha wee bụrụ ndị guzobere Semalt bụ ndị mepụtara ọrụ ebube. N’oge a ụlọ ọrụ akụzila ọrụ, ndị ma ọrụ na ndị ahịa afọ juru n’ụwa niile, na-enyere ndị mmadụ aka ime ka nrọ ha mezuo.
Kedu ihe ị kwesiri ịchọpụta azụmaahịa gị n'oge a? Kwesighi ịga leta okirikiri ma ọ bụ chere n'ahịrị. Ihe ị ga - eme bụ ị kpọtụrụ ndị ọkachamara na - ahụ maka Digital Digital ma mee ụfọdụ iji zụlite azụmahịa gị. Ọ ga-aba uru n ’ebe ị nọ yana mba mba gị. Ọ bụrụ n’ịchọrọ ka ijuju ekwentị na ozi email site n’aka ndị ahịa, bulie ahịa gị, ma rite uru n’ọrụ gị, naanị na-agụ.
You na-atụ ụjọ na ị nwere ike ghara ịghọta ngwa ọrụ Semalt SEO? Ndị ahịa anyị si mba dị iche iche wee bịa, yabụ ndị ọrụ anyị ga na-agwa gị asụsụ ịchọrọ. Bịa ebe a ka ị chọpụta ndepụta asụsụ. Ndị ahịa anyị zitere anyị okwu ekele maka inyere ha aka ịzụlite ma nwee ọganihu:
Ọrụ MAKA ROYAL (Center Service Apple). N'iji Semalt FullSEO, ụlọ ọrụ a (nke dị na Ukraine) mụbara okporo ụzọ ya na 300% na-erughị otu afọ!
Zaodrasle.si. Ọnwa iri iji soro Semalt rụọ ọrụ kwere ka ụlọ ahịa mmekọahụ a nke Slovenia dabere na intaneti na-arịwanye elu okporo ụzọ na weebụsaịtị ha site na 520%. Kwa ọnwa ọnụ ọgụgụ nleta na-abawanye na 1216. N'ihi nke a, Zaodrasle.si abụrụla onye isi ụlọ ọrụ Slovenian na mpaghara ahịa ya.
Portal maka ịchọ na ịzụta aha franchises. Ihe ngwugwu FullSEO mere ka azụmahịa a nwekwuo ọnụ ọgụgụ isi okwu Google TOP-10 gaa 5782, si otú a na-eto okporo ụzọ ya site na 303% naanị ọnwa 9. Taa, ụlọ ọrụ a bụ otu n'ime aha ndị kachasị ewu ewu na ụlọ ọrụ mgbasa ozi nke UK.
Use na-eji Internetntanetị? Mgbe ahụ ị ga-amata ihe injinia na-achọ. I jirila ma obu otutu n’ime ha. N'ime ndị dịgasị iche iche, Google bụ nnukwu. Olee otu o si arụ ọrụ? Type pịnye mkpụrụ okwu ọchụchọ ma ọ bụ okwu, pịa 'ọchụchọ,' ihe nchọta a na-eweghachiri gị ndepụta nke saịtị achọtara. Kedu ihe kpatara ụfọdụ ji arụ ọrụ dị elu, ebe ndị ọzọ na-agbada na ndepụta? Statistics na-agwa anyị, ihe ka ọtụtụ n'ime ndị ọrụ na-enyocha ọkwa kachasị elu. Iji nọrọ ebe ahụ, ịkwesịrị ịbanye na TOP-10. Iji gosipụta gị n’elu nsonaazụ ọchụchọ, ịkwesịrị ịme ihe, nke ga-eme ka ọnọdụ gị ka mma na ndepụta ajụjụ.
Ngwá ọrụ SEO anyị
Ndị ọrụ injin Semalt bụ ndị ọkachamara na-eme ka saịtị gị apụta na ọnọdụ mbụ na Google TOP 10. Mgbe ị nọ ebe ahụ, okporo ụzọ gị na ịzụ ahịa n'ịntanetị ga-ama jijiji. Ndekọ ọnụ ọgụgụ anaghị agha agha - usuu ndị ọrụ ntanetị na-eto kwa ụbọchị. Ugbu a, ihe karịrị otu ụzọ n'ụzọ atọ nke ndị bi n'ụwa nọ na ntanetị. Ikwesiri ịdọrọ ndị na-ege ntị a ntị, n'ihi na ị nwere azụmahịa, ọ nwekwara ego ị ga-emefu. Puku kwuru puku na puku ndị ọrụ na-achọ ngwongwo yiri nke gị na webụsaịtị gị. Ndị asọmpi swifter gị chọrọ iwere ọnọdụ kachasị mma na nsonaazụ ọchụchọ. Gini mere? Ikwesịrị ịnọ ya - yabụ nye ndụ gị na weebụsaịtị gị na njikarịcha njirisi nyocha.
Ndị mmadụ hụrụ vidiyo n'anya! Anyị nwere ike gosi ihe ị na-eme na vidiyo nkwado dị mma. Ọ ga - ewetara gị ndị ahịa ọhụrụ ma mee ka ntụgharị gị too!
Nyocha saịtị saịtị
N'ime ụwa anyị ngwa ngwa, otu ihe bara ezigbo uru bụ ozi. Ọ bụrụ n’inweta ya n’oge, ị nwere ike idozi usoro gị n’ihu ma zere mmejọ na-egbu mgbu. Otu n’ime ụzọ isi ejikwa mmepe azụmahịa gị bụ site n’inyocha data nyocha anyị na ịkọ ọganiihu n’ọdịnihu. Nweta ozi ebumnuche n'etiti ndị ọkachamara anyị.
Naanị chee, na ihe ruru puku nde mmadụ atọ nwere ike ịbụ ndị ahịa gị n'ọdịniihu. Kedu ihe kpatara na ha anaghị aga ịzụ ahịa n'ịntanetị ugbu a? Ọ bụ ihe nwute, mana ndị ahịa gị na-adọpụ uche na nde ndị na-ere ahịa na-asọrịta mpi n'ịchụkwudo ndị zụtara ha na ego ha. Ndị mmegide ahụ anaghị ekwe ka ị banye Google Top. Iji bụrụ onye mmeri n'ọsọ maramma a, ị ga-ahọrọ ndị otu kachasị aka ọrụ gị na ha ga-arụ ọrụ.
Na Semalt, ị nwere ike ịchọta ụzọ ọhụụ iji melite ahịa gị. Anyị nwere ike ịhazi ọrụ ịnabata mma zuru oke nke nwere ike ịgụnye: mmepe ụlọ ahịa n'ịntanetị, imezigharị yana nkwalite ya na nkwado ọrụaka kachasị mma. Kpọtụrụ ndị na-enye anyị ndụmọdụ ma rụpụta nsonaazụ kachasị egwu na ndị ọkachamara Semalt!
Gịnị mere ndị mmadụ ji ahọrọ anyị?
N'oge nkwonkwo anyị na Agencylọ Ọrụ Digital anyị, ndị ọkachamara anyị ga-akwado gị awa 24 kwa ụbọchị, ụbọchị 7 n'izu. Ha ga-aghota nkọwa kacha nta nke azụmahịa gị n'ịntanetị.
Anyị arụlarịrị ọrụ anyị nke ọma karịa 800 000cases ma gwụchaa ha. Anyị na ndị ahịa karịrị narị puku atọ rụkọtara ọrụ. Can nwere ike lelee ọrụ niile dị na weebụsaịtị anyị.
Ọnụahịa ezi uche dị na ya maka nsonaazụ mara mma
Ndị ahịa anyị nwere ekele maka ịdị mma ọrụ anyị n'ihe metụtara ọnụego mgbanwe na ọnụ ahịa ọnụ ahịa mara mma.
Nchọpụta nyocha zuru oke
Nke mbu, oru ngo gi gha enwe onye isi nke gha n’enye oru maka usoro anyi anyi n’enye. Anyị ga-achịkọta ozi zuru ezu banyere ndị asọmpi gị tupu oge eruo. A ga-enyocha ihe owuwu saịtị ahụ. Iji mee ka ndị na-ege ntị na-elekwasị anya, ndị otu SEO anyị ga - ewere isiokwu ndị dabara adaba ọnụ yana ibe nkwado maka nkebi ahịrịokwu ndị dị mkpa. A ga-enyocha ebe nrụọrụ weebụ gị maka nzacha Google. Ọkachamara anyị ga-akpachara anya mepụta usoro maka ịme ihe ndị ọzọ
Ole na ole iji bulie akụrụngwa ịntanetị
Anyị na-adụ ọdụ ike iji ndụmọdụ ndị a. Ọ ga - eme ka azụmahịa gị na asọmpi karịa. Ebe nrụọrụ weebụ gị ga-ezere ihe mgbochi, na nkwalite gị ga - enwerịrị ike ịrụ ọrụ karịa.
Inyocha ma dezie koodu HTML iji mee ka ọ bụrụ nke zuru oke;
Imepụta akara na akara dị ka ọkọlọtọ nchọta ọchụchọ ọhụrụ;
Iji mkpado mere meta meta meta.
Na-enye njikarịcha, anyị na-emechi njikọ ndị mebiri emebi. Ọzọkwa, anyị na-emepụta njikọ dị ka o kwere mee na akụ ndị akwadoro. Ọ dị ezigbo mkpa idezi faịlụ robots.txt na .htaccess. Ihe omume a ga - enyere gị aka ịhụ ọkwa nke weebụsaịtị gị na ọkwa nke inyocha ihe.
Eleghi anya enwere otutu okwu ohuru na okwu amaghi ama? Anyị achọghị ka ị ghafee mgbagwoju anya. Mana ọ bụghị nfe ahụ ị bụrụ onye ewu ewu na World Wide Web. O choro ihe omuma puru iche na ahuhu oma nke oru ndi mbu. Gị na ndị ọkachamara maara ihe na nke enyi na enyi, ị ga - enweta mkpọsa SEO siri ike. Weebụsaịtị gị ga-apụta ìhè maka ndị ahịa na ndị nwere mmasị na ọrụ gị ma ọ bụ ngwongwo anyị site n'enyemaka anyị.
N’agbanyeghi ebe i bi ma obu asusu eji asusu gi. Nwere ike inwe ụdị azụmahịa ọ bụla, anyị ga-achọtakwa azịza maka gị. Ebe a na-eme bred ma ọ bụ na-ekesa ụgbọala, ụlọ ọrụ ọ bụla nwere ike ịba ama. Gbalịa imeziwanye azụmahịa gị na Agencylọ Ọrụ Digital anyị ma nweta nsonaazụ kacha mma!